Tantaran-Jazavavy Etiôpiana Nanohitra Ny Fakàna An-keriny, Sy Ny An’ireo Mpisolovava Nanavotra Ny Fiainany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Oktobra 2015 8:33 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, Swahili, polski, Català, Nederlands, Français, عربي, Magyar, Ελληνικά, 繁體中文, 简体中文, English
Tizita Hagere (havanana) no nitàna ny toeran'i Hirut Assefa, 14 taona, ao anatin'ny ‘Difret.’ Sary: Truth Aid Media.
Ny 22 Oktobra 2015 ity lahatsoratra sady tatitra anaty onjampeo avy amin'i Joyce Hackel sy Julia Barton ho an'ny The World ity no nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org, ary naverina avoaka eto ho ampahany amin'ny fifampizaràna votoaty.
Milaza zavatra maro samihafa ny teny hoe “Difret” amin'ny fiteny Amharic ao Etiôpia: mety hidika “fahasahiana” izy na “fanànana fahasahiana”, fa koa mety hoe “voaolana”
Toy ny lohateniny, maneho zavatra marobe ilay sarimihetsika “Difret” : asa famoronana nifototra tamin'ny tantara iray tena marina, miresaka fahasahiana sy fiovàna; iray amin'ireo hany sarimihetsika avy ao Etiôpia voarakitra amin'ny endrika 35mm; ary nahazo dera avy amin'ireo anarana goavana toy ny an'ilay tale mpanatanteraka Angelina Jolie Pitt. Saingy ambonin'ny zavatra rehetra, tantara momba ny fomba fanao nentim-paharazana, tarafina amin'ny zavatra niainan'ny ankizivavy iray nipararetra tratry ny tadio tsy vitany nofehezina, no tantarain'ilay sarimihetsika.
“Difret” dia niainga avy amin'ny tantaran'i Aberash Bekele — antsoina hoe Hirut ao anatin'ilay sarimihetsika— ankizivavy iray nalain'ireo lehilahy nitaingin-tsoavaly an-keriny tany ivelan'ny ambanivohitra Etiôpiana nisy azy. Andro nifindràny ho amin'ny kilasy faha-5 tamin'izay. Ireo mpaka azy an-keriny — izay tsy nahavita nahazo alàlana tamin'ny rainy mba haka azy ho vady — dia misisika izao amin'ny filazàna fa manana zo hanambady azy noho ny fombandrazana fantatra amin'ny hoe telefa. Saingy nanohitra ikàla, nahafaty azy tsy nahy. Miandry azy ny sazy fanamelohana ho faty mandra-pihetsiky ny mpampanoa lalàna, Meaza Ashenafi, hiady ho azy. Nampivanàka ny firenena iray manontolo ny vokatr'ilay raharaha mangotraka tao amin'ny efitrano fitsaràna, tamin'ny 1996, rehefa nitranga.
“Nanomboka niresaka indray momba ny fakàna an-keriny ny olona,” hoy i Meaza Ashenafi mampahatsiahy ankehitriny. “Iaraha-mahalàla, indrindra any amin'ny tapany atsimon'ny firenena, efa an-taona maro ny vehivavy no alaina an-keriny. Tsy nisy fanontaniana mikasika izany. Saingy nanokatra adihevitra iray io raharaha io, ary fifanakalozana manodidina ity fomba fanao netindrazana ity.”
Vao roa taona talohan'io i Ashenafi no nametraka ny Fikambanan'ireo Vehivavy Mpisolovava mba hiady ho an'ny zon'ireo vehivavy araka ny Lalàm-panorenana vaovao tao Etiôpia tamin'izany fotoana izany.
Ampahanà seho avy amin'ny “Difret” ahitàna ny fakàna ankeriny tamin'ny soavaly ilay mpilalao fototra. Sary: Truth Aid Media
Nandritry ny enina herinandro, lafo daholo ary tsy ampy aza ny tapakila hijerena ny “Difret” tao Addis Ababa. Rehefa nihevitra ny hitondra azy hivoaka any ivelany ireo mpamokatra ilay sarimihetsika, nalefan'izy ireo tany amin'i Jolie, malaza amin'ny fandresena lahatra ho an'ny zon'ny vehivavy ao Afrika aloha.
“Mba hahazoany mpijery maro, làlan-tsarotra no eo anoloan'ny sarimihetsika iray amin'ny fiteny vahiny avy ao Afrika,” hoy i Mehret Mandefro miaiky. “Araka izany dia manampy anay tokoa ny fahazoana tohana avy aminy … manampy hanatratra ireo olona izay tsy heveriko ho tratra akory mihitsy.”
Na eo aza ny fanohanan'ireo anarana goavana sy ny fahombiazan'ny “Difret,” lazain'i Ashenafi sy Mandrefo fa tsy mbola vita ny asan-dry zareo : vinavinain-dry zareo ho 20 isanjato raha kely indrindra ireo fanambadiana any atsimon'i Etiôpia no noterena tamin'ny alàlan'ny endrika sasantsasan'ny telefa.
“Mila mifarana io,” hoy i Ashenafi. “Tsy tokony holeferina mihitsy io na ahoana na ahoana.”
Raha ny momba ilay sarimihetsiha kosa, lazain'i Mandrefo fa henjana ny fiainany — taorian'ilay raharaha, tsy navela hiverina any amin'ny vohitra nisy azy na any amin'ny fianakaviany izy. Sekoly teny amin'ny sisiny no narahany, ary taty aoriana kely dia nanapaka hevitra hanova anarana sy handao an'i Etiôpia izy. Nefa, tsy ela akory izay, niverina ary niasa momba ny raharaha telefa izy, amin'ny fanantenana hanao izay tsy hiainan'ireo ankizivavy ny sedra niainany.